Hagidda cusub ee Gobolka ee dugsiyada sare | Updates
Hagidda cusub ee Gobolka ee dugsiyada sare
Waaldiinta/daryeelayaasha Qaaliga ah:
Fadlan la soco: Macluumaadka hoose ma khuseeyo ardayda ka diiwaangashan Akadeemiyada Waxbarashada Durugsan ee sanadkoo dhan ah.
Maalintii Feb. 17, gudoomiye Tim Walz wuxuu bixiyey hagid cusub in ardayda dugsiyada sare ku soo noqdaan waxbarashadii iskuulka, oo ah maalin-badhkeed (habka isku-dhafka) ama maalin buuxda (qaabka waxbarashada iskuulka oo buuxa), “ilaa iyo inta [iskuuladu] ay awoodaan inay hirgeliyaan dhammaan talaabooyinka badbaadada caafimaadka cusub.”
Sidaad ogtihiin, ardaydeena dugsiyada hoose waxay durba ku jiraan waxbarashada iskuulada oo buuxda (oo ku shaqaynaya hagid cusub oo u gaara ardayda dugsiyada hoose), ardayda dugsiyada sarena waxay bilaabeen ku soo laabashada qaabka isku-dhafka maanta.
Waxaan hadda qaadaynaa waqti aan ku baarno dhamaan waxyaabaha tilmaamaya tilmaamaha cusub ee maanta oo ay ku jiraan, oo ay ka mid yihiin tilmaamo kale, shuruudaha kala fogaanta ee lixda ft “ markasta oo ay suuragal tahay” iyo ugu yaraan sadex cagood mararka kale oo dhan.
Fadlan oqow rabitaankayagu waa in dhamaan ardayda (marka laga reebo kuwa doortay DLA da) ay awoodaan inay si buuxda ugu soo laabtaan waxbarashadii iskuulka sida ugu haboon ee macquula. Waxaan aaminsan nahay in waxbarshada iskuulku si fiican u caawiso waxbarashada ardayga, shucuurta bulshada, iyo fayoobaanta cuntada. Waxaan hadda si taxader leh u tixgelin doonaa saamaynta hagitaanka cusub ku yeelanayso hawlgalada dugsiyada sare, waanan idinla soo socodsiin doonaa wixii macluumaad dheeri ah ugu dambayn March 1.
Sidii caadiga ahayd, waan kaaga mahadcelinayaa dulqaadkaaga iyo fahamka intii lagu jirey xiliyadii adkaa ee sanadka.Waan la socdaa inay jiraan aragtiyo kala duwan oo ku saabsan ficilka saxda ah. Fulinkasta oo qaab waxbarasho, ujeedadayadu waa caawinta hubinta caafimaadka iyo badbaadada ardaydeena iyo shaqaalaheena.
Xusuunow: Ardayda fasalada 10 iyo 11 waxay ku soo laaban doonaan qaabkii waxbarashada kooxaha ka bilaabanta March 1.